Group B UCL: Huntelaar Iyo Afellay Oo Ka Saaciday Schalke Inay Emirates Ku Garaacdo Arsenal. - jornalizem
Group B UCL: Huntelaar Iyo Afellay Oo Ka Saaciday Schalke Inay Emirates Ku Garaacdo Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa guuldarro culus oo Champions League ah ay ku soo gaartay caawa garoonkooda Emirates Stadium ka dib markii Schalke ay kaga badisay labo gool iyo waxba.
Iyadoo ciyaartaan la filayay in goolal lagu furi doono qeybteydii hore ayaysan sidaas noqon, waxaana qeybtii hore ay labada kooxood ku kala baxeen barbaro goolal la’aan ah.
Labada kooxood ayaana abuuray fursado dhowr ah balse kama aysan faa’ideysan, inkastoo Schalke ay ku andacootay qeybihii hore ee ciyaarta inay aheyd in loo dhigo rigoore, laakiin Afellay ayaaba ku qaatay jaale madaama garsooraha uu u arkay inay aheyd istuur.
Qeybihii hore ee qeybta labaad ayaysan wax badan isbedelin midkoodna kooxaha Arsenal iyo Schalke uma aysan suurtogalin inay shabaqa soo taabtaan.
Laakiin taas ayaa isbedeshay daqiiqadii 76aad markii Huntelaar uu ka faa’ideystay isku dhecyaac offside oo ay sameeyeen daafacyada Arsenal islamarkaana gool dabamariyay goolhaye Mannone.
Waxaana ciyaarta hurdo u diray oo guusha u xaqiijiyay kooxda reer Jarmal ee Schalke ciyaaryahanka amaahda kaga soo maqan Barcelona Ibrahim Afellay kaasoo kubad uu u soo dhigay Farfan shabaqa ku hubsaday.
Goolkaas ayaana u xaqiijiyay Schalke inay 2-0 ku dubato kooxda Arsenal oo marti loogu ahaa garoonkeeda Emirates Stadium, waxaana halkaas ku soo gabagabowday 16 kulan oo Arsenal aan looga badin garoonkeeda kulamada Champions League.
Kulanka kale e group-kaan kooxda Olympiakos ee dalka Gariiga ayaana gaartay guushii ugu horeysay ka dib markii ay 2-1 kaga badiyeen Montpellier.
Kooxda Schalke ee dalka Jarmalka ayaa hogaanka u qabatay Group B iyagoo leh 7 dhibcood seddex kulan oo ay ciyaareen, waxaana ku xigta Arsenal oo leh 6 dhibcood, Olympiakos ayaana heshay guushii ugu horeysay iyagoo leh 3 dhibcood, Montepllier ayaana ugu hooseysa oo leh 1 dhibic.